समसामयीक | Infomala - Part 21
प्रवास / समसामयीक
त्यसपछि कडाइ थालेको प्रहरीले तस्करहरूले दैनिक १०० देखि १५० जनासम्म नेपालीलाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै लैजाने गरेको र यो क्रम करीब चार वर्षदेखि चलिरहेको डरलाग्दो तथ्य फेला पायो । यो हिसाबले वार्षिक कम्तीमा डेढदेखि दुईलाख नेपालीलाई यसरी विदेश पुर्याइएको देखिन्छ । (more…)
Comments Off on मानव तस्करको जालो
मनोरंजन / विश्रान्ति / समसामयीक / समाज
चर्चा कमाउने काइदा
चर्चामा छाउन फिल्मकर्मीले ग्ल्यामरलाई भजाउने गरेका छन् । अभिनय तिखार्नुको सट्टा अंग प्रदर्शन गरेर वा अश्लील दृश्य दिएर चर्चा बटुल्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ । (more…)
Comments Off on चर्चा कमाउने काइदा
५ महत्वपूर्ण प्रश्नहरू
तपाईं जीवनको सफलता चाहनुहुन्छ ? आफैलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ ? दिनको अन्तमा स्वयंलाई सोध्नुहोस यी प्रश्नहरू-
१, के भो राम्रो आज मलाइ ?
तपाईंलाई आज गर्विलो, खुशी वा धन्य के कुराले बनायो ? काम फत्ते भएको वा अनन्दित भएको क्षण याद गर्नुहोस् । त्यो क्षणलाई सराहना गर्दै त्यस्तो अवसर पुनः प्राप्त भइरहोस् भनी प्रयत्न गर्नुहोस् ।
२, अरू राम्रो के गर्न सक्थें आज म ?
आजको अनुभवले के पाठ सिकियो ? आज के गल्ती भयो र त्यसलाई भोली कसरी सुधार्न सकिन्छ ? त्यस्तो गल्तीको बेला के गरेको भए वा के बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो ? सुधारका निम्ति गहनसाथ सोच्नुहोस् । (more…)
Comments Off on ५ महत्वपूर्ण प्रश्नहरू